Wonke umfazi mhlawumbi unamacengezi esiliva - amacici, amasongo, iintambo, amabhonkce kunye nezinto ezinjalo. Mhlawumbi umntu kwikhabethe unayo i-silverware. Kungakhathaliseki ukuba yintoni na into eyenziweyo yesilivere, kubalulekile ukuba ufanele unakekele into enjalo.
Ngokuqhelekileyo, iingubo zesiliva emva kwexesha liqala ukunyamalala kwaye ziphele. Akunakuboni kakuhle, ngoko ke, imihlobiso enjalo kufuneka ihlambuluke ekubuyiseleni ukubukeka kwayo kwangaphambili. Ubumnyama besilivere unakho ngezizathu ezahlukahlukeneyo. Njengomthetho, oku kwenzeka ngenxa yokuba isilivere iphendula ngokuthe ngqo kwizinto ezahlukahlukeneyo eziqulethwe kwizonyango kunye neekhemikhali zendlu. Oku kuya kukhanya xa kudibanisa nomzimba kwaye ukuba igcinwe ngokungalunganga.
Ngelishwa, ngokungafani negolide, isilivere ayikwazi ukucocwa nayiphi na indlela. Kule nqaku, siya kukuxelela indlela yokuhlaziya ngokukhuselekileyo isilivere ekhaya.
Ukucocwa kwesilivere usebenzisa i-ammonia
I-Nashtyarny utywala ngenye yezona ndlela zisebenzayo zokucoca isilivere. Kodwa nangaloo nto kufuneka umlumke kakhulu. Emva kwakho konke, akuyiyo yonke into eguguzayo yokuhlambulula ngamatye nge-ammonia. Isilivere egolide-neeparele ayikwazi ukucocwa nge-ammonia nganoma iyiphi indlela. Kukho iindlela ezininzi zokucoca isilivere kunye nale nkunkuma.
Le ndlela ifanelekile ukucoceka isilivere kunye nezinye izinto zokugcoba, apho kungabikho ukufakwa kwamatye anqabileyo. Kufuneka ukuba uthathe i-10% ye-ammonia kwaye ucoce iigrafu kuyo imizuzu elishumi, emva koko kuyimfuneko ukucoca ngokucacileyo ubuncwane phantsi kwamanzi acocekileyo. Ngoko imihlobiso kufuneka imiswe kwaye iphosiwe kakuhle.
Le ndlela ifanelekile ukucoca ityefile yesilivere. Kufuneka ukuba uthathe i-spoonfuls ye-ammonia, udibanise kunye neepunile ezihlanu zamanzi kunye netafile ye-iodine yepasti yezinyo. Kwisisombululo esiphumelayo, gcoba ilinen uze uyihlambulule kunye nesitya ngasinye okanye izitya. Emva koko, susela isilivere kakuhle kumanzi acocekileyo uze usule omile.
Ukulungiselela isisombululo sesithathu, thatha amanzi ashushu kunye nesepha yokuhlamba impahla. Lungiselela isisombululo sesobho. Kwisisombululo, faka isilivere imizuzu engamashumi amabini, uze uwuhluthe phantsi kwamanzi, usule. Emva koko, kuyimfuneko ukuxuba umoya we-ammonia kunye nekhefu elichotshoziweyo kude kube nokubunjwa kwe-gruel. Yenza le gruel kwisilivere uze ulinde ubunzima bokuqinisa. Emva koko sukuma isilivere phantsi kwamanzi kwaye uphonkce nge-cloth ye-suede.
Ukucocwa kwesilivere usebenzisa i-citric acid
Amatye esilivere ngamatye angahlambuluka nge-citric acid. Ukwenza oku, thabatha i-gram i-citric acid kwaye uyihlaziye ngeiglasi ezimbini zamanzi. Fumana umxube ubilise kwindawo yokuhlambela ngamanzi kunye neenesilivere zegolide zesiqingatha ezingamashumi amabini ukuya kwemashumi amathathu. Emva koko, gcoba ngokucokisekileyo ukuhlobisa ngamanzi epompo.
Ukuba awufuni ukubilisa iingubo zakho, ucofe umso we-lemon uze ubeke imihlobiso yesilivere kuyo. Ngokukhawuleza xa ukubukeka kwayo kwangaphambili kubuyela kwisiliva, thabatha iimpahla ezivela kwijusi uze uzihluthise phantsi kwamanzi.
Ukucoca kwesilivere usebenzisa ityuwa kunye ne-baking soda
Oku kuthetha enye yezona zifikeleleke kakhulu zokucoca iimveliso zesilivere. Ukucoca isilivere nge-soda, kuyimfuneko ukuthulula iglasi yamanzi kwisitye (kodwa kungekhona i-aluminium) isitya kunye nokucoca iipunipoli ezimbini ze-soda kuzo. Gxininisa kakuhle kwaye ufake umxube emlilweni. Ngokukhawuleza ukuba isisombululo se-soda siqala ukubilisa, sinciphise isiqwenga sokutya, kwaye imihlobiso efuna ukuhlanjululwa. Bala ukuya kwishumi kwaye uthabathe isilivere kwisisombululo sesoda. Geza iimveliso uze usule owomileyo.
I-Poroshchnikoz soda ayikwazi ukuxubha iimveliso zesiliva. I-Soda i-abrasive, ecacileyo, isusa isambatho esimnyama, kodwa iya kuwonakalisa loo mveliso ngokwayo, iyakrazula. Nangona kunjalo, ngale ndlela kunokwenzeka ukuba uhlambulule ukusika, apho kungenani elikhulu lamaphetheni. Ukwenza oku, uthele i-soda encinci ibe yisisi, yongeza amanzi amancinci, kodwa i-soda akufanele ichithe, kodwa iphendule ibe yintsimbi ye-slurry. Kwi-gruel eyimiphumo kubalulekile ukuba udibanise i-rag kwaye uphuse ngokukhawuleza le mveliso ngendwangu.
Ukucoca izinto zesilivere ngetyuwa, kufuneka ulungise isisombululo se-saline. Ukwenza oku, thabatha itaspoon yetyuwa kwaye uyichithe kwiiglasi. Kwi-liquide eyiphumela, cwina isilivere ezimbini ukuya kwiiyure ezintathu. Emva koko, imveliso kufuneka ibiliswe kwisisombululo esifanayo. Yilise imizuzu elishumi ukuya kwishumi elinesihlanu, emva koko isilivere ihlanjululwe ize isule.
Ukuhlanjululwa kwesilivere nge-hydrogen peroxide
I-hydroxy peroxide ihlambulula isilivere kakuhle. Isilivere ecocekileyo, ayifuni isongelo. Nangona kunjalo, iimveliso zesilivere kunye nokudibanisa kwezinye izinyithi zingenza umonakalo kule nkunkuma. Xa edibene ne-hydrogen peroxide, izitishi zingenziwa i-oxidized (ngaphandle kwegolide). Ukuze ugweme imiphumo emibi, ngaphambi kokucoca umkhiqizo, kufuneka uvavanyo oluncinci.
Ukuba ubeka iimveliso kwigolide ecocekileyo ixesha elithile kwi-hydrogen peroxide, akukho nto iya kwenzeka kubo. Nangona kunjalo, kwitafile zesilivere kunye negolide zesilivere, le ndlela ingaba yingozi. Ngako oko, kukulungele ukungayisebenzisi le mveliso yokucoca iimveliso zesilivere.
Ezinye iindlela zokucoca iimveliso zesilivere
Ukongezelela kwezixhobo ezingentla ngasentla zokucoca i-silverware, kukho nezinye iimveliso ezisetyenzisiweyo ngaphambili kwe-ammonia, i-citric acid, i-hydrogen peroxide kunye nabanye. Iimali ezinjalo zifumaneka lula kwikhaya ngalinye okanye kuthengwe kuyo nayiphi na isitolo.
Ukuhlanjululwa kwesilivere nge-husk yolisi
Kubalulekile ukulungiselela umhluzi ogqityiweyo kumagqabi egalikhi kunye nemveliso yesilivere ebilisiwe. Ixesha lokubilisa lixhomekeke kwindlela ininzi yesilivere eye yaphela ngayo.
Ukuhlanjululwa kwesilivere ngokusebenzisa umhluzi wezambatyambo
Kubalulekile ukuba ubilise iitapile ezimbalwa, uhluthwe. Ngokukhawuleza ukuba umhluzi ulungele, kubalulekile ukuba uphume amazambane ukusuka kuwo, kwaye unciphise amaqhosha esilivere endaweni leyo. Imveliso kufuneka igcinwe kwi-decoction e-10 ukuya kwemizuzu elineshumi elinesibini, emva koko ikhutshwe, ihlanjwe ize isule.
Ukuhlanjululwa kwesilivere ngoncedo lweqanda
Thatha umgudu we-aluminium okanye ipuphu. Phalaza amanzi apho, faka iigobolis ezivela kwi-bipartis (nganye ilitha yamanzi) kunye nepuniposi yetyuwa. Nangona amanzi eshisa, hlambulula phantsi kwezinto ezishisayo zamanzi ezenziwe ngesiliva. Emva kwaloo ndawo indawo yamanzi abilayo kwaye ubambe apho khona imizuzwana engama-20. Kwinqanaba lokugqibela lemveliso, kubalulekile ukuba uhlambe phantsi kwamanzi uze usule.
Ukucoca intliziyo nge coca cola
Isiselo esinokusetyenziswa kwe-carbonate sisetyenziselwa ukucoca izinto ezininzi zasekhaya. Zihlambulule ngezindlu zangasese, iibheke ezivela kwinqanaba, ukukhupha nzima ukungcola kunye nesilivere. Ukubuyisela isilivere ukukhanya kunye nombala wangaphambili, kubalulekile ukubilisa iimveliso zesilivere kwi-coca-cola imizuzu emihlanu. Kodwa jonga kwesi sixhobo kufuneka senziwe ngokuqapha.
Ukucoca intliziyo ngomlomo
Isixhobo esinjalo asikwazi ukuhlangabezana nokuhlaselwa okumnyama. Nangona kunjalo, iya kubuyisa i-silver silver. Thatha ibhulo elidala leminwe kwaye usebenzise umgca we-lipstick kuwo. IsiPolish kakuhle i-silverware kwaye uyihlambulule.
Indlela yokunyamekela uboya
Yintoni ekufuneka ikhangele xa kuthengwa indlu kwimarike yesibini?
Yintoni endikunika ngayo uNyaka omtsha 2015-2016?
Izakhiwo zonyango kunye nemilingo ye-chalcopyrite
Iipropati eziwusizo zamakhiwane kunye nokusetyenziswa kwayo kumayeza omntu
Iimfihlelo zokunyamekela iinwele ezintle
Kunokuba uhlambe iinwele?
U-Xenia Borodina wathetha ngeendaba zokuzalwa komntwana
Akukho nto enhle ngaphezu kweentyatyambo
Isaladi yomgubo kunye neklabishi